Warren oo ka hartay tartanka doorashada Mareykanka
Senator-ka laga soo doorto gooblka Massachusetts Elizabeth Warren ayaa ka hartay tartanka doorashada madaxweynaha Mareykanka ee dimoqraadiga, kadib markii ay ku fashilantay inay xitaa hal gobol, oo uu ku jiro gobolkeeda, ku guuleysato maalintii Super Tuesday.
Warren ayaa la filayaa inay taleefonka kula hadasho shaqaalaha ololaheeda, si ay ugu dhowaaqdo inay hakineyso isku dayga ay ku noqon lahayd musharaxa dimoqraadiga, waxaa sidaa weriyey New York Times, CNN iyo qaar kale oo ka mid ah warbaahinta Mareykanka.
Warren ayaa xagaagii tagay hogaamineysay qaar ka mid ah codadka ra’yiga dadweynaha, hase yeeshee marnaba ma maareyn inay dhisto xulufo ku hogaamiya inay guulo ka gaarto tartanka is-reeb reebka dimoqraadiga,
Haritaanka Warren ayaa tartanka dimoqraadiga ka dhigaya mid ay ku loolamaan laba muharax oo kala ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Joe Biden oo 77 jir ah, iyo Senator Bernie Sanders oo ah 78 jir laga soo doorto gobolka Vermont.
Warren ayaa kaalinta saddexaad ka gashay gobolkeeda Massachusetts, doorashadii dhacday Talaadadii ee loogu magac daray Super Tuesday, markaasi oo sidoo kale lagu loolamay 13 gobol oo kale.
Ka-haritaanka Warren ee loolanka, ayaa timid maalin kadib markii sidoo kale uu ka haray duqii hore ee New York, bilyaneer Michael Bloomberg.
Sida uu qoray New York Times, Warren ma qorsheyneyso inay taageerto musharax kale. Bloomberg ayaa taageeray Joe Biden.